မြန်မာ - ထိုင်းမြို့နယ် အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ (မဲဆောက်-မြဝတီ) အစည်းအဝေး မြဝတီမြို့ ၌ ကျင်းပ - Yangon Media Group
မြန်မာ – ထိုင်းမြို့နယ် အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ (မဲဆောက်-မြဝတီ) အစည်းအဝေး မြဝတီမြို့ ၌ ကျင်းပ
မြဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ
(၄၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းမြို့နယ် အဆင့်နယ်ခြားကော်မတီ (မဲ ဆောက်-မြဝတီ)အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ မြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အာရှ လမ်းမကြီးအနီးရှိ Grade One ဟိုတယ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိသည်။ အခမ်းအနားတွင် မြဝတီ နယ်ခြားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနယ်မြေ ခံတပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင် ဆန်းဝင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက် မြို့နယ်ခြားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမှတ် (၁၄) ခြေလျင်အထူးတပ်ရင်း/တပ် ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အာစာလဟဖွန် စူဝမ်းတို့မှ အဖွင့်အမှာစကားများ ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ နယ်ခြားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဆန်းဝင်းက ”ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မြန် မာနိုင်ငံသားအချို့၏ နိုင်ငံကူးလက် မှတ်စာအုပ်များတွင် ဗီဇာအတု များတွေ့ရှိခဲ့မှုကိစ္စများ၊ မြဝတီမြို့ ၌ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက်အဖြူရောင် ပုံဆောင်ခဲများနှင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သည့်ကိစ္စများ၊ သောင်ရင်းမြစ်အ တွင်း ထိုင်းဘက်မှသဲစုပ်ယူနေသည့်ကိစ္စများနှင့် မြစ်ကမ်းအနီး၌ စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် မြေပြုပြင် နေသည့်ကိစ္စများနှင့် လမ်းဖောက် လုပ်ခြင်းကိစ္စများကို တင်ပြခဲ့ရာ ထိုင်းနယ်ခြားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ တင်ပြချက်များအပေါ် ဥပဒေအ တိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ပါကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးသည်။
အလားတူထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ နယ်ခြားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ”ထိုင်း- မြန်မာ အမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေး တံတားအနီး မဲဆောက်မြို့နယ် ထဆိုင်လဝပ်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဖုတ်ဖမြို့နယ် ဝေါလေချောင်းရိုး မြေထိန်းနံရံနှစ်ခု ပြုလုပ်မည့် ကိစ္စများ၊ မြန်မာမော်တော်ယာဉ် များ ထိုင်းဘက်သို့ဝင်ရောက်လာ ရာတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပါက နစ်နာသူများ၏ အခွင့် အရေးကိစ္စများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး၊ မော်တော်ယာဉ် များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ တရားမဝင်သယ်ဆောင်နေမှုများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တရား မဝင်ဂိတ်များမှ ဝင်ထွက်နေသည့် ကိစ္စများ၊ တောမီးလောင်မှုများကို လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံများသို့ မြန်မာ လူနာများပို့ဆောင်ရာတွင် အချက် အလက်ပြည့်စုံစွာနှင့် ကြိုတင် အကြောင်းကြားရေးကိစ္စများနှင့် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြား ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ သောင်ရင်း မြစ်အတွင်းပူးပေါင်းကင်းလှည့်၍ လုံခြုံရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရေး များကို တင်ပြရာ မြန်မာဘက်မှ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး စည်းကမ်းနည်း လမ်းများ၊ သံတမန်နည်းလမ်းများ ဖြင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေး ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်သဘောထားတူညီမှု များ ရယူခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
နေမာနှင့် မကျေလည်မှုများ ရှိနေသည် ဆိုခြင်းကို ကာဗာနီငြင်းဆန်
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူစာချုပ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပ
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အမျိုးသား လိင်အင်္ဂါ အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသမှု အမေရိကန်တွင် အောင်မြင်
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်တွေမှာ နောက်ထပ် သရုပ်ဆောင်ချင်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ မင်းသမီး ဟယ်လီဘယ်ရီ
အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေသည့် အင်းဝပြတိုက်တွင် အင်းဝနန်းမြို့ ပုံစံငယ် အပါအဝင် အင်းဝခေတ??
သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူ ဆပ်ပြာခွက်များ ယာဉ်အတွင်း သိုဝှက် သယ်ဆောင်လာစဉ် ဖ??
နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ကြိုးစားသွားမည် ပါတီအမည်ပြောင်းရေး ကိစ္စ